Ukuthi ama-beet angasetshenziswa noma angasebenzi kuhlobo 2 lwesifo sikashukela: ukuphikisana nokuphikisana, imikhawulo yokusetshenziswa > Ukudla ngesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukuthi udle ama-beet ane-Type 2 sikashukela?
Isifo sikashukela sohlobo 2 sitholakala kakhulu kubantu asebekhulile. Kuzwakala njengesinqumo: izolo ungadla noma yini, futhi namuhla udokotela ubeka ukudla okuqinile. Ngabe lokhu kusho ukuthi manje awukwazi ukudla noma yini emnandi?
IBeetroot, imifino eyintandokazi yabaningi, inambitheka kamnandi. Ngabe ibuye iphikiswe kuhlobo 2 sikashukela? Ake sibheke ukuthi kungenzeka noma cha ukudla izitshalo eziyimpande nalesi sifo.
Ama-beeters ekudleni sohlobo 2 sikashukela
Lapho bexilonga uhlobo 2 lwesifo sikashukela, odokotela baqale banikeze isiguli ukudla okuqinile. Lokhu kunzima, ngoba ubusuku bonke kufanele ushiye izitsha ezijwayelekile ezimnandi nezizithandayo.
Eqinisweni, kuvela ukuthi ayikho imikhiqizo eminingi kakhulu ukuthi ngokwezigaba engeke idliwe yisiguli sikashukela. Into esemqoka ukwazi isilinganiso, ukubala amayunithi esinkwa futhi ungakhohlwa ngemithi ebekiwe (amaphilisi noma imijovo).
Ama-Beets ayimikhiqizo engavunyelwe., kepha kuneminye imiqondo yokusetshenziswa kwayo kanye nemikhawulo, okumele ifundwe ngokucophelela futhi ungakhohlwa ngayo. Kuyavela ukuthi le imifino ingahle isetshenziselwe ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 2.
Phakathi kwemifino, izindebe ziphakathi kwabaholi abasebenza ngezakhiwo eziwusizo. Isusa ubuthi, usawoti wezinsimbi ezisindayo nama-radionuclides emzimbeni, iqinisa izindonga zemithambo yegazi, ithuthukise uhlelo lokugaya ukudla.
Imifino iqukethe inani elikhulu lamavithamini, amaminerali, ama-macro- kanye nama-microelements. Ngaphezu kwalokho, i-beetroot inika umzimba amandla namandla, ikhulisa ukusebenza kahle futhi iqede i-hangover.
Isitshalo sezimpande sinomphumela oqinile we-laxative, usetshenziselwa ukunciphisa isisindo. Odokotela beluleka abesifazane abakhulelwe ukuthi bafake imifino ekudleni kwabo. IBeetroot iyasiza nokubhekana nokungahambi kahle kokuya esikhathini, ukuya esikhathini kanye ne-mastopathy. Kwabesilisa, kuyasiza ngoba kwandisa imisebenzi yabo yezocansi.
Ijusi leBeetroot linohlu oluhlukile lwezakhiwo ezizuzisayo. Yisebenzise engxenyeni noshukela weminye imifino, izithelo namakhambi. Wonke umuntu uzokwazi ukuthola iresiphi yokudidiyela eyosiza ukufeza umphumela oyifunayo.
Ama-beet kanye nejusi lawo asiza ekwelapheni izifo ezahlukahlukene. Lokhu kufaka i-oncology, i-tonsillitis, impumulo egeleza, i-anemia, umfutho wegazi ophakeme, i-asthma, ukubangwa kwamakhaza, ukungalingani kwe-hormonal, ukuqothuka kwe-macular kanye nokuqunjelwa.
Naphezu kwezakhiwo eziningi ezinjalo ezizuzisayo, ama-beet angalimaza umzimba. Lokhu kungenxa yokuthi iqukethe inani elikhulu le-fiber kanye noshukela, futhi futhi inomphumela wokugaya nokuqina.
Uma wazi futhi ulandela yonke imikhawulo kanye ne-contraindication, ukusetshenziswa kwalesi sihlahla ngeke kuthinte impilo kabi, kepha kuzonikeza umphumela omuhle.
Ukuqanjwa kanye nenkomba ye-glycemic
Ukuqanjwa kwama-beets kungabizwa ngokuthi ucebile ngempela. Ngaphezu kwamavithamini A, B1, B2, B4, B5, B6, B9, C, E, K no-PP, imifino iqukethe i-betaine ne-beta-carotene, kanye ne-potassium, i-calcium, i-magnesium, i-sodium, i-phosphorus, i-iron, i-manganese, ithusi , i-selenium ne-zinc.
Inani lokudla okwenziwe ngamabheshu aluhlaza futhi abilisiwe lihluka kancane. I-100 g yemifino eluhlaza iqukethe i-1.6 g yamaprotheni, u-0,2 g wamafutha no-9.6 g wama-carbohydrate. Inani lamandla - 43 kcal. I-100 g yemifino ebilisiwe iqukethe u-1.7 g wamaprotheni, u-0,2 g wamafutha no-10 g wama-carbohydrate. Inani lamandla - 44 kcal.
Kodwa-ke, inkomba ye-glycemic yamabheki abilisiwe iphakeme kabili kunezikhathi eluhlaza. Inkomba ye-glycemic iyinkomba yekhono lomkhiqizo lokukhulisa ushukela wegazi. Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, yonke imikhiqizo ihlukaniswe ngombandela njengezindawo ezintathu: luhlaza, ophuzi nobomvu - kuya ngenkomba ye-glycemic.
Kubalulekile! Izinga eliphakeme le-glycemic index, elikhudlwana futhi libukhali ngomkhiqizo odliwayo linyusa ushukela, okusho ukuthi lapho kulimaza kakhulu isifo sikashukela.
Ngokuqondene nama-beet, inkomba yayo ye-glycemic efomu eluhlaza ingama-30, kuthi kuphekwe eyodwa - 65. Ngakho-ke, ibhungane eluhlaza lingena endaweni “eluhlaza”, liphuka emzimbeni kancane futhi lingabangeli ushukela wegazi.
Ama-beet aphekwe akhiwe phezulu kakhulu kwendawo “ephuzi” (ngoba imikhiqizo enenkomba ye-glycemic engu-70 nangaphezulu iwela endaweni “ebomvu”). Iphuka emzimbeni ngokushesha okukhulu kunokuluhlaza, futhi ingadala ukugxuma okubukhali kushukela wegazi.
Ngokusobala, kuphephe futhi kuphephile ukuthi abanesifo sikashukela badle ama-beets aluhlaza kunama-beets abilisiwe. Lokhu kubaluleke kakhulu kwisifo sikashukela sohlobo 1.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, ukudla kuyasindisa, ngakho-ke kwesinye isikhathi ziyakwazi ukukhokha ama-beets abilisiwe amancane. Into esemqoka ukwazi isilinganiso futhi ukhumbule inkomba yayo ephezulu ye-glycemic.
Ngabe ushukela uyakhuphuka?
Ngokusekelwe enkombeni ye-glycemic yama-beet angaphekiwe futhi abilisiwe, siphethe ngokuthi imifino eluhlaza cishe ayikhuphi ushukela futhi ngokuqinisekile ngeke ibangele ukugxuma okubukhali.
Awungeke usho okufanayo ngezilimo zezimpande ezibilisiwe. Abanesifo sikashukela kudingeka basisebenzise ngokunakekela okukhulu. Inkomba ye-glycemic yemifino ingama-65, okukhombisa amandla we-beet abilisiwe ukukhulisa ngokuqinile amazinga kashukela wegazi.
Ama-raw beetle anenkomba ephansi ye-glycemic, okusho ukuthi angafakwa ekudleni komuntu onesifo sikashukela. Inezinto eziwusizo kakhulu ezanyamalala ngesikhathi sokwelashwa okushisa.
Ngasikhathi sinye, ama-beets amasha anomthelela onamandla emzimbeni, ukusetshenziswa ngokweqile kwemifino eluhlaza kuzoyilimaza kakhulu kunokuba, ngokwesibonelo, kubilisiwe. Ngakho-ke, kufanele ucabangele ngokucophelela ukuphikiswa nemikhawulo mayelana nokufakwa kwama-beets amasha ekudleni.
Ukudla kwabantu abanesifo sikashukela sohlobo 2 akukubi kangako njengoshukela onesifo sikashukela. Odokotela bancomela uhlobo lwesifo sikashukela sokuqala ukuthi lingadli ama-70 g yemifino eluhlaza ngosuku, kanye nohlobo 2 sikashukela - hhayi ngaphezulu kwe-150 g.
Yize inkomba ye-glycemic yama-beet abilisiwe ingaphezulu kune eluhlaza, imikhawulo yokusetshenziswa kwayo kwesifo sikashukela sohlobo 2 icishe ifane: ifinyelela ku-100-120 g ngosuku. Kepha thayipha oshukela abangu-1 kufanele badle le imifino ebilisiwe kancane ngangokunokwenzeka.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokunciphisa ubungozi bezikhala ezinoshukela lapho imifino yezimpande ebilisiwe ingezwa ekudleni.
Isibonelo, amazambane abilisiwe angasuswa kusuka kuresiphi ye-vinaigrette, khona-ke isitsha sizoqukatha amayunithi esinkwa ambalwa futhi angithinti kangako ushukela wegazi.
Ukupheka i-borsch ngaphandle kwamazambane kanye nokungenelwa kwenyama enamafutha (kunokuba inyama enamafutha) kuzosusa nengozi yemiphumela emibi lapho kudliwa lesi sidlo sinesifo sikashukela.
Ukungeza izitsha ezinjalo ekudleni kuzosiza hhayi kuphela ukukala nokulawula izinga loshukela egazini, kodwa futhi nokugcina isisindo esijwayelekile. Ngemuva kwakho konke, imvamisa ngesifo sikashukela sohlobo lwesibili, abantu baqala ukuthola isisindo, kuba nzima ngokwengeziwe kubo ukuthi bahlale belungile.
Izici ezizuzisayo zejusi le-beetroot zaziswa kakhulu: zingalapha umphimbo obuhlungu nekhala eligudlayo, longeke ekushiseni kwenhliziyo nasephaleni, lisize ekwelapheni i-oncology, umfutho wegazi ophakeme kanye nezifo zesibindi.
Ijusi leBeetroot liyasiza futhi emzimbeni weziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Kukholelwa ukuthi inomphumela we-anticonvulsant, futhi futhi yandisa amazinga e-hemoglobin futhi ihlanza izindonga zemithambo yegazi.
Kulokhu, kunjalo, kufanele uqaphele kakhulu lapho kulungiswa futhi kusetshenziswa lesi siphuzo. Kunezindlela ezimbili zokulungiselela ujusi we-beetroot. Kulula kakhulu nge-juicer. Uma kungekho khishi elinjalo, kuyodingeka usebenzise indlela yesibili. Sithatha i-gauze, i-grater, isitshalo esiyimpande esiqinile futhi esikhanyayo. Sigeza futhi sihlanze imifino, singene amapuleti, sigaye bese sinya nge-cheesecloth.
Kubalulekile! Qiniseka ukuthi ubeka ijusi eliphuma esiqandisini amahora amabili: awukwazi ukuliphuza elisanda kufakwa!
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, kunemithetho eminingana yokusebenzisa ujusi we-beet:
Ngemuva kokugcizelela kunconywa susa amagwebu uthele isiphuzo kwesinye isitsha ngaphandle kokuzitika.
Ukudla ijusi nsuku zonke kwabanesifo sikashukela kufinyelela ku-200 ml. Ungaphuza inani elingama-50 ml ngesikhathi. Ngakho-ke, ujusi we-beet kufanele uhlukaniswe okungenani ngezindlela ezine usuku lonke.
Kuyadingeka ukwethula isiphuzo ekudleni kancane kancane. Qala nge-1 tsp. indlela futhi zonke izinsuku ukhulisa kancane ingxenye uze ufike ku-50 ml.
Inani nobuningi bokusebenzisa
Ngaphandle kokudla okuthile, akunakwenzeka ukulwa nesifo sikashukela sohlobo 2. Yize ingenzima kangako njengoba inesifo sikashukela sohlobo 1, kusadingeka ukwazi isilinganiso lapho usebenzisa noma yimuphi umkhiqizo.
Njengoba sekushiwo, kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, odokotela batusa ukuthi kungadliwa ama-beet angama-150 g ama-beet angaphekiwe, ama-100-120 g ama-beet abilisiwe futhi angaphuzi ngaphezu kwama-200 ml wejusi le-beet ngosuku (ahlukaniswe ngemithamo emine yama-50 ml). Ngohlobo 1 sikashukela, le mithamo kumele incishiswe cishe ngesigamu.
Mayelana nemvamisa yokusetshenziswa kwama-beet by diabetes, lapha izincomo zodokotela nazo ziyahlukahluka ngokuya ngohlobo lwesifo. Ama-diabetesics ancike ku-insulin kufanele adle ama-beet ngangokunokwenzeka, aqaphe ngokucophelela ukusabela komzimba.
Uhlobo 2 sikashukela lungcono kakhulu. Odokotela bavunyelwe ukufaka ama-beet ekudleni kwansuku zonke, ukuqaphela ngokucophelela ukulinganiselwa okungenhla.
Ngaphezu kokukhuphuka kwamazinga kashukela wegazi, ama-beet anenani elikhulu leminye imiphumela emibi. Funda ngokucophelela imikhawulo kanye ne-contraindication ngaphambi kokudla isivuno sezimpande ezibomvu nganoma yiluphi uhlobo.
Imvamisa phakathi kokuphikisana nokusetshenziswa kwama-beets, isifo sikashukela siyabonakala. Kepha sesivele sithola ukuthi akudingekile ukuthi sizincishe ngokuphelele imifino ebomvu. Kwanele nje ukubheka isilinganiso esinqunywe ngabe-endocrinologists. Kuthiwani ngokunye ukuphikisana?
Ama-beet (ikakhulukazi aluhlaza) akufanele asetshenziselwe i-gastritis ne-urolithiasis, kanye nezinye izifo zezinso. Ngenxa yomphumela oqinile we-laxative, ama-beet aphulwa kubantu abanesifo sohudo esingamahlalakhona, isilonda se-duodenal nezinye izifo zamathumbu.
I-acid ekhuphukile yesisu ayikuvumeli imifino eluhlaza ukuthi ingezelwe ekudleni, kepha ingafakwa endaweni ebilisiwe. Ngokusobala, ngisho nangokubekezelela komuntu ngamunye ezingxenyeni zezitshalo zezimpande ezibomvu, akufanele kusetshenziswe kunoma yikuphi.
Isaladi leColeslaw neBeetroot
iklabishi, 150 g,
beet, 1 pc.,
uwoyela wemifino, 10 g,
Gaya iklabishi, usawoti bese ulifaka ujusi. Faka ama-beet anyosiwe abilisiwe. Sifaka i-citric acid ngenani elincane lamanzi. Sikhotha isaladi ngenhlanganisela yamafutha yemifino exutywe ne-citric acid ne-xylitol.
I-Beetroot, ikhukhamba kanye ne-apperizer yamahashi
ikhukhamba, 1 pc.,
i-horseradish, 10 g
ukhilimu omuncu, 10 g,
Sika ikhukhamba ngesigamu bese usika inyama kuyo. Hlikihla ama-beet ku-grater enhle, hlanganisa ne-uginindela wekhukhamba kanye ne-horseradish. Sisakaza ingxube ephumayo ibe ngama-halves likhukhamba, uthele ukhilimu omuncu bese ufaka imifino.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela mellitus sohlobo lwesibili kwenziwa hhayi ngemithi kuphela, kepha nangokudla okubandakanya imikhiqizo ecebiswe ngezinto ezilandelwayo namavithamini. Imifino nezithelo, kufaka phakathi ama-beet, kufanele kufakwe ekudleni kwansuku komuntu ogulayo. Ukuqanjwa kwayo kufaka izinto ezizuzisayo ezifana nefibre, i-iron, amavithamini wamaqembu A, B, C no-E, amaminerali, i-chlorine, i-pectin, i-organic acid ne-fiber yokudla Ngaphezu kwalokho, kuyimifino edliwayo ezoba usizo kubantu abaphethwe ukukhuluphala, ngenkathi kuthuthukiswa inhlala-kahle kanye nokuqinisa amasosha omzimba.
Isitshalo sezimpande siwusizo kakhulu kwizifo zenhliziyo, kunconywa ekuvinjelweni kwe-anemia kubantu abadala nasezinganeni. Ukusetshenziswa kwaso kugcizelela umsebenzi wamapheshana emathunjini, kuvimbela ukuqunjelwa, ukuvikela izifo eziyingozi kubantu, njenge-atherosclerosis nomdlavuza.
I-Beetroot kushukela sikashukela nayo ilusizo ngoba ukusetshenziswa kwayo kusiza ekulinganiseni imetabolism, kusindisa umuntu kusuka kumakhilogremu angeziwe. Uma kudliwa kaningi, i-microcirculation yegazi yenziwa ijwayelekile, ngenxa yokuthi imisebenzi yesibindi ibuyiselwa emuva. Ngaphezu kwalokho, ezigulini ezinesifo sikashukela, umbono uyathuthuka kakhulu.
Isikhunta, esiqukethe ama-beets, sinomthelela ekugcwalisweni komzimba okusheshayo ngisho noma kudliwa ngamanani amancane, futhi lokhu kuhle, ngoba uma unesifo sikashukela akufanele uphuze umzimba kakhulu. Isitshalo sezimpande sinciphisa kakhulu ukumuncwa kwama-carbohydrate, anomthelela ekwandeni koshukela wegazi.
Okunye ukufaka lesi sitshalo sezimpande ukuthi uma upheka noma usabalalisa, zonke izinto eziwusizo ezakha ukwakheka kwazo kuhlala zingashintshiwe. Kepha, njenganoma yiliphi ibhizinisi, into esemqoka ukuthi ungayidli ngokweqile: akunakushiwo ukuthi kufanele weqe inani elinconyelwe odokotela.
Ungayisebenzisa kanjani imifino yezimpande?
I-Beetroot kushukela ingafakwa etafuleni kuphela ngefomu elibilisiwe, le-stewed nelibhakiwe. Imifino eyimpande edliwe eluhlaza ibanga ukwanda okubukhali koshukela wegazi. Ngemuva kokupheka, inkomba ye-glycemic yemifino incishiswa kakhulu, futhi ngenxa yalokho ingadliwa ngokungakhathaleli okuncane noma akukho.
Imvamisa, ngezinhloso zokwelapha, kunconywa ujusi we-beet ngendlela eluhlaza. Noma kunjalo, kukhona ukubhuka: kuyadingeka ukunikeza ijusi eyenziwe ngomumo eyenziwe ngomumo ngaphambi kokuyisebenzisa ukuze ime amahora angama-2-3. Kufanele kukhunjulwe ukuthi uma kunconyelwa ukuphuza ingilazi yejusi le-beet ngosuku, kuyadingeka ukuhlukanisa le ngxenye izingxenye ezine bese uyiphuza usuku lonke.
I-Beetroot kushukela kufanele ichithwe ngokulinganisela, okuwukuphela kwendlela yokuthola umphumela omkhulu ngaphandle kokulimaza umzimba. Ingxenye efanele ngosuku ngosuku 1 isivuno sezitshalo enesisindo esingu-200-300 g.
Amasaladi enziwe ngama-beets angatholwa ngamafutha omnqumo noma inani elincane lekhilimu omuncu. Uviniga, imayonesi kanye nezinye izinongo ezishisayo akuvunyelwe. Ngaphezu kwalokho, isivuno sezimpande singangezwa kuma-snack ahlukahlukene kanye nesobho.
Izindlela ezimbalwa zokupheka zabanesifo sikashukela:
I-beetroot ebandayo. Ukulungiselela kwayo, udinga i-beetroot decoction - 0.5 l kusuka ku-beet eyodwa encane, amazambane abilisiwe - 1 pc., Iqanda, amakhambi ukunambitha, ukhilimu omuncu, usawoti. Iresiphi ilula: umhluzi upholile, khona-ke zonke izithako zigawulwa kuwo bese zitholakala ngo-ukhilimu omuncu nosawoti. Ukuze uthole piquancy, ungangeza i-citric acid ne-xylitol.
Iborsch iluhlaza. Uhlu lwemikhiqizo edingekayo imi ngalendlela elandelayo: inyama yenkomishi - 0,1 kg, ama-beet - i-1 pc., I-olive yama-olive - 30 ml, amazambane ama-2, isanqante esingu-1, utamatisi o-1, i-sorrel encane, ukhilimu omuncu, iqanda nemifino ukunambitha. Okokuqala udinga ukwenza umhluzi wenyama (0.5 l wamanzi uzokwanela). Amazambane agawulwa kuwo, bese kuthi emva kwemizuzu engu-15-20 yonke imifino ifakwe (kuyalulekwa ukuyikhokhisa kuqala). Okokugcina, kubikwa ukuthi i-sorerel isobho. Ngemuva kwalokho, ipani liyambozwa futhi lishiywe ukuba lihlwili. Ngaphambi kokukhonza, engeza ukhilimu omncane omuncu kanye nemifino ekhethiwe endishini yesobho.
Isaladi elinempilo. Imifino engu-3 yezimpande idluliswa ku-grater eyi-coarse, ifakwe ngomlilo, engeza amanzi amancane nesitshulu kuze kuphekwe, kusawoti, kuvikelwe nge-citric acid kanye namafutha zemifino. Zonke zixubene kahle futhi zilethwe ngamathumba.
Izifo lapho kudingekile ukulahla ngokuphelele ama-beet zifaka: i-gastritis, ulcer esiswini, i-allergies, isifo sezinso, i-cystitis.Naphezu kweqiniso lokuthi inenqwaba yezakhiwo eziwusizo, kuseneziphikiso ezithile ngokusetshenziswa kwayo kwezifo zohlelo lwe-endocrine. Kulokhu, ngaphambi kokusebenzisa, kufanele uthintane nochwepheshe futhi ucacise ukuthi ama-beet angakwazi yini ukusebenzisa isifo sikashukela. Udokotela uzokutshela uma ukusetshenziswa kwayo kuvunyelwe uma kwenzeka kuhlangana ne-pathologies esetshenziswayo.
IBeetroot nezimpawu zayo
IBeetroot isitshalo esikhulu esiyimpande esikhulu nesimnandi sombala omhlophe, obomvu noma we-maroon, osetshenziswa kabanzi ezweni ukulungiselela izitsha eziningi. Ama-beetle amasha afakwa kumasaladi, kuphekwe izitsha ezimnandi, zithosiwe bese kubhakwa kuzo.
IBeet idume kakhulu emithini yesintu ngenxa yezakhiwo zayo eziwusizo nezokuphulukisa.
Le mifino inothile ngamavithamini, amaminerali, zonke izinhlobo zezinto eziphilayo ezinomphumela omuhle emzimbeni.
Kumagremu ayi-100 we-beet yile:
11.8 g ama-carbohydrate
Amaprotheni ku-1.5 g
Amafutha ku-0,1 g
Ama-beet acebile ngama-mono- kanye nama-disaccharides, ama-organic acid, i-fiber, isitashi ne-pectin. Ine-zinc, i-phosphorus, i-iron, i-fluorine, i-sodium, i-potassium, ithusi, i-molybdenum, i-calcium, i-magnesium. Le mifino isebenza njengomthombo wamavithamini wamaqembu C, A, B2, ZZ, B1, E. AmaBets aqukethe amakhalori angama-42 kuphela.
IBeetroot ilusizo ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe, ngoba iqukethe i-folic acid, edingekayo enkambweni evamile yokukhulelwa nokwakhiwa kohlelo lwezinzwa lwengane engakazalwa.
Lapho upheka imifino, kufanelekile ukubheka imithetho yokupheka ama-beet, ukuze abe lusizo kakhulu. Ukuze wenze lokhu, kungenziwa ngo-ukhilimu omuncu noma ngamafutha omnqumo, othuthukisa ukungezwani komkhiqizo. Udinga futhi ukukhumbula ukuthi umkhiqizo ophekwe ngaphakathi udonswa ngumzimba kangcono kakhulu kunama-beets amasha. Ijusi leBeetroot lenziwa kuphela ngemifino emisha.
Ama-beet abilisiwe abhekwa njengomkhiqizo wokudla, ngoba anezinga eliphansi lekhalori. Kuyasiza kulabo abafisa ukunciphisa isisindo sabo. Kwezinye izimo, kufanelekile ukuguqula izitsha ezijwayelekile kusuka kuma-beet, ukuzenza zisebenziseke kakhulu emzimbeni. Isibonelo, ungakhipha amazambane ku-vinaigrette ukukhipha izithako ezinomsoco omncane. I-Borsch nayo ingaphekwa ngaphandle kwamazambane, enyama engenamafutha, ukunciphisa okuqukethwe kwamafutha esitsheni. Ushizi wekotishi onamafutha aphansi angezwe ku-isaladi yasebusika, ngenkathi ususa ama-prunes kanye ne-pancreatitis, ngendlela, ungalapha futhi uvikele lolu hlobo lokudla.
Yini enye engaphatha i-beetroot
Futhi, usebenzisa ama-beet kanye nejusi le-beetroot, ungalapha izifo ezinjenge:
Isilonda esisesiswini noma esiswini
Emithini, kunamaqiniso lapho izimila ezinomdlavuza zelashwa zisebenzisa ujusi we-beet. Kubandakanya i-beetroot iyithuluzi elihle kakhulu elihlanza umzimba ngokushesha nangokuphumelelayo.
Ngabe kuthinta kanjani ushukela wegazi: ingabe kuyanda noma cha?
Okunye kokuphikisana ekudleni komuntu onesifo sikashukela ama-beets. Isitshalo sezimpande sinezimfanelo ezinhle nezimbi. Ngaphandle kokuba khona kwenani elikhulu lezinto ezibalulekile emifino, ine-index ephezulu kakhulu ye-glycemic kanye nenqwaba yama-carbohydrate. Lokhu kungaholela kushukela ophezulu wegazi nokukhiqizwa kwe-insulin okusebenzayo. Abantu abanesifo sikashukela abashesha ukufaka ama-beet kwimenyu yabo yansuku zonke.
IBeetroot yohlobo 2 lwesifo sikashukela
Njengoba sekushiwo ngenhla, ama-beet ane-index ephezulu kakhulu ye-glycemic, noma kunjalo, akudingekile ukuyikhipha masinyane ekudleni kwesifo sikashukela sohlobo 2. Iqiniso ukuthi ama-beet anomthwalo omncane kakhulu we-glycemic ka-5, awuqhathanisa kahle neminye imifino.
Ngakho-ke, kufanelekile ukubhekisisa lo mkhiqizo, ngoba izimbotshana ezinezimfanelo ezinhle zoshukela. Le mifino inomphumela onenzuzo ekusebenzeni kohlelo lwezinhliziyo ngenxa yokwakheka okukhethekile kwejusi le-beet kanye nokuba khona kwama-tannins. Lokhu kukuvumela ukuthi uhlanze izindonga zemithambo yegazi kusuka kuma-cholesterol plaque, uthuthukise ukugeleza kwegazi, wenze umfutho wegazi ube ngokwejwayelekile futhi ukhuphule izinga le-hemoglobin egazini.
Inani elikhulu le-fiber ku-beetetsize lifana nomsebenzi wamathumbu. Kuyasiza ukwehlisa ijubane lokufakwa kwe-carbohydrate, okuholela ekukhuleni kancane kancane koshukela wegazi. Ukuze kungabikho ukweqa izinkomba zohlobo 2 lwesifo sikashukela, udinga ukunamathela kumthamo wansuku zonke futhi ungawudluli. Ochwepheshe besifo sikashukela bayelulekwa ukuba bangadli ama-gramu angama-200 wejusi noma ama-gramu ayi-70 wemifino emisha, uma izimbiza ziphekiwe zibilisiwe, umthamo wazo ungaphindeka kabili.
Ama-beet ayaziwa kabanzi ngemisebenzi yawo ye-laxative, ngakho-ke iyasebenza ukuqunjelwa, ahlanze isibindi, aqede izinto ezinobuthi nemisebe emzimbeni. Ijusi le-Beet liyindlela enhle yokuqinisa amasosha omzimba, ngakho-ke livame ukusetshenziswa ngemuva kokugula isikhathi eside ukubuyisela isimo somzimba jikelele. Lesi sici sibalulekile nakuhlobo 2 sikashukela.
Naphezu kweqiniso lokuthi ama-beets abhekwa njengomkhiqizo owusizo kakhulu, awukwazi ukudliwa yibo bonke abantu abanesifo sikashukela. Lo mkhiqizo awunconyelwanga izilonda zesisu nezangaphakathi.
Futhi, ngokuqapha, udinga ukusebenzisa ama-beet for gastritis, ngoba ijusi le-beet linomphumela ocasulayo ebusweni be-mucous besisu. Abanye abantu, abangafuni ukulahla lo mkhiqizo osizayo, bashiya ujusi we-beet uvulekile emoyeni omusha amahora amaningi, kuphela ngemuva kwalokho uma sebedakiwe lapho uthamba futhi ungalimazi ulwelwesi lwe-mucous, amasende abhontshisi angasetjenziselwa ushukela 2 thayipha.
Ngakho-ke, ukuze udle ama-beet nezitsha ezivela kuwo ngenxa yesifo sikashukela noma cha, wonke umuntu uthatha isinqumo ngokuzimela, egxile kakhulu kubunzima balesi sifo, izimpawu kanye nezimpawu zomzimba ngamunye. Iziguli ezinomdlavuza wesifo sikashukela sohlobo 2 kufanele zibonane nodokotela wazo ngaphambi kokwethula ukudla kwe-beetroot ekudleni kwazo.
Lapho ukhetha ama-beet, kuyadingeka ukuhlukanisa phakathi kwemifino yetafula nefishi, esetshenziselwa izilwane. Kuyafaneleka ukukhetha izitshalo ezincane zezimpande. Zithambile, ziqukethe imicu emincane. Lapho ama-beets amakhudlwana ekhula, maningi amathuba okusebenzisa izithasiselo zamakhemikhali. Umkhiqizo onjalo awungazinzi, ubola ngokushesha kanye nama-rots emazingeni okushisa asekamelweni.
Lapho ukhetha i-beet yetafula, naka lezi zimfanelo ezilandelayo:
umbala we-fetus ubomvu onsundu noma ubomvu,
uginindela ufana, ngaphandle kwemithambo yombala omhlophe noma oluhlaza,
imifino eqinile, ngaphandle kokulimala, imihuzuko, amakhandlela,
amaqabunga aluhlaza anemithambo ebomvu,
ukwakheka kuyindawo okusaqanda, kuyindilinga (ushintsho kupharamitha kukhombisa ukwephulwa kwezimo ezikhulayo),
Lapho uthengiswa, izithelo kufanele zingabi namaqabunga, ngoba zincela uketshezi esithelweni.
Ekuphekeni, sebenzisa izimpande namahlamvu emifino. Lokhu kokugcina kufanele kube luhlaza, okusha, ngaphandle komonakalo.
Ngaphambi kokudla isibeletho, ingaphakathi lakhona liyahlolwa. Uma ama-veins, voids, amafomu amnyama abonakala ngemuva kokusika, awukwazi ukudla imifino. Lokhu kuwuphawu lokutheleleka ngefungus. Kuvunyelwe ukusebenzisa umkhiqizo oqukethe imifantu emincane ngaphakathi.
Gcina imifino endaweni epholile emnyama. Uma isikhathi sokugcina isikhathi eside, kungcono ukubeka ama-beet esiqandisini.
Imifino idliwa iluhlaza, ibilisiwe, inosiwe noma ijusi. Imifino eminingi ilahlekelwa izimfanelo zayo ezinzuzisayo ngenxa yokwelashwa okushisa. Ama-beet aqukethe amavithamini kanye namaminerali agcinwa ngemuva kokupheka. Kulahla amakhalori kuphela. Ukuze usheshe ukufaka ama-beet aphekwe kushukela ngezinto ezinosizo, amasaladi we-beet ayoliswe ngamafutha omnqumo.
Sinikeza isaphulelo kubafundi besayithi lethu!
Bearha aluhlaza aqukethe izakhi zomzimba eziningi. Njengoba inzima, igcotshwa ku-grater. Ukuze uthuthukise ukunambitheka, abanesifo sikashukela bavunyelwe ukufaka inani elincane lekhilimu omuncu ophansi kanye no-ushukela obambele yena. Uma ukhetha ama-beets asezingeni eliphakeme, unokunambitheka okumnandi ngaphandle koshukela ongeziwe, okubalulekile kushukela.
Ijusi yemifino ilusizo kakhulu, kepha inenkomba ye-glycemic ephezulu. Ukuyinciphisa, engeza amanzi abilisiwe. Ngosizo lwejusi, inani lamaseli abomvu egazi liyakhuphuka. Esikhathini sikashukela, izitho zihlupheka ngenxa yokushoda komoya-mpilo (hypoxia).
Ngomthelela omuhle wezinto ezizuzisayo eziqukethwe kuma-beet, kudliwa izikhathi ezi-2 ngesonto.
umhluzi we-beetroot, 0.5 l,
amazambane, ama-2 ama-PC.,
iqanda, 1 pc.,
Pholisa umhluzi we-beetroot, ubhake ama-beet. Gaya imifino (iparsley, i-dill, u-anyanisi), amazambane, ikhukhamba kanye nama-beet abhakwe. Sikhotha ingxube ephumayo ngo-ukhilimu omuncu, i-citric acid ne-xylitol. Faka izithako kumhluzi ohlanganisiwe nosawoti ukunambitha.
Ngaphandle kokukholelwa kabanzi kokuthi i-beetroot akufanele idliwe yisifo sikashukela, akufanele uphatheke kabi. Kuyavela ukuthi ngalesi sifo, ungadla isilimo esiyimpande ebomvu. Futhi ngesifo sikashukela sohlobo 2, odokotela bayakuvumela nokuba kufakwe ekudleni kwansuku zonke.
Into esemqoka ukutadisha ngokucophelela ukulinganiselwa, ama-contraindication kanye nokudla nsuku zonke kwalesi sihlahla. Kuyadingeka ukukhumbula ngemiphumela emisha ehlukahlukene engabangelwa yi-beet ebunjiwe, kanye nejusi le-beetroot. Ngaphambi kokufaka imifino ekudleni, xhumana nodokotela oyi-endocrinologist.
Inkomba ye-glycemic yemifino eluhlaza nokubilisiwe
Ukuze uqonde ukuthi yini lokhu - inkomba ye-glycemic nokuthi kungenzeka yini ukudla ukudla okune-beet okuqukethwe ushukela ophezulu egazini lesiguli, kuyadingeka ukuqhathanisa imifino eluhlaza eyi-100 g nemifino ebilisiwe engu-100 g. Njengoba kwenzeka, umkhiqizo ongaphekiwe futhi ubilisiwe unesinkomba ehlukile somphumela wama-carbohydrate ekushintsheni kwamazinga kashukela egazini, futhi unomthwalo ohlukile we-glycemic.
ama-beet angaphekiwe - 30,
ama-beet abilisiwe - 65.
Ukusuka kulokhu kuhlaziya kungabonakala ukuthi inani likashukela kulo lincike ohlotsheni lokusetshenziselwa isivuno sezimpande. Kwimifino eluhlaza, iphansi amahlandla amabili kunemifino ebilisiwe.
Kubalulekile! Ngaphandle kokuthi ama-beet anenkomba ye-glycemic ephezulu, inomthwalo omncane we-glycemic.
Kungenzeka yini ukudla umkhiqizo wabanesifo sikashukela?
Ngenxa yenkomba yokulayisha ephansi ye-glycemic, ama-beets angafakwa ekudleni kwabanesifo sikashukela, ikakhulukazi labo abanezinkinga zokugaya. Ukwakheka kwamakhemikhali empandeni kuqukethe izinto ze-betaine ezifaka isandla ekuthatheni kangcono amaprotheni, kwehlise umfutho wegazi, kulawulwe imetabolism yamafutha, futhi kuvimbele ukwakheka kwama-atherosranceotic plaques.
Kuyasiza ukuba isifo sikashukela sisebenzise ama-beet futhi ngoba anomthelela omuhle emithanjeni yegazi nenhliziyo, ekugomeni, kulawula amazinga e-hemoglobin, futhi ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphezulu kwefayibha, kusiza ukuqunjelwa.
Uhlobo 1st. Abantu abahlushwa uhlobo lwe-1 sikashukela i-mellitus (encike ku-insulin), ama-beet angadliwa, okubaluleke kakhulu, angequki izinkambiso ezivumelekile.
Uhlobo lwe-2. Inkomba yokulayisha ye-glycemic yesitshalo esiyimpande ebomvu isezingeni eliphansi kunalokho. Kungakho-ke ama-beets engabi yingozi empilweni yesiguli futhi, ngenxa yalokho, umbuzo wokuthi ingadliwa yini noma cha ngohlobo lwesi-2 lwesifo ixazululwa kahle - ngokufaka imifino emenyu yansuku zonke. Lapho usebenzisa ama-beets, inqubo yokumuncwa kwe-carbohydrate iyancipha, ukuze ukugxuma okubukhali ku-glucose wegazi kungenzeki.
Njengoba kunikezwe ukuthi isifo sikashukela asiphikisiwe ku-beets, isifo sikashukela singadliwa ngokwenza ezinye izinguquko zokupheka zakudala, ezaziwayo, ukunciphisa ubungozi bemiphumela emibi. Cabanga ukuthi ama-beet angasetjenziswa kanjani ezitsheni ezahlukahlukene:
lungiselela i-vinaigrette, ungafaki amazambane abilisiwe kuyo, enenani elincane lokudla,
pheka isobho nge-borsch enyameni ebusayo, futhi ususe amazambane esitsheni,
engeza ushizi wekotishi onamafutha amancane kusaladi le-beetroot,
ujusi we-beetroot ulusizo, kepha hhayi ngaphezu kwama-200 g ngosuku, okufanele udakwe emigqonyeni eminingana,
yidla imifino egayiwe eyoliswe ngamafutha omnqumo noma ukhilimu omuncu.
Ukusetshenziswa kwama-beets kuzosiza umuntu onesifo sikashukela ukuba anciphise isisindo, futhi futhi ngeke kuvume ukuthi amazinga kashukela akhuphuke kakhulu. Ukuthola imiphumela emihle ekwelashweni kwalesi sifo, abanesifo sikashukela badinga ukuqapha ngokuqinile ukuthi ukudla kwabo kuyalingana.
Ingabe imifino ebomvu ebomvu iyasebenziseka noma iyingozi?
Kubantu abanesifo sikashukela, ukusetshenziswa ngokulinganayo kwama-beet kunezici ezimbalwa ezinhle. Ijusi lempande ebomvu nemifino ngokwayo inomphumela omuhle:
Kwejwayelekile ukucindezela kwegazi,
ithuthukisa umsebenzi wamathumbu,
kubambezela ukumuncwa kwama-carbohydrate.
Kodwa-ke, ngaphandle kwenzuzo isivuno sezimpande esinayo kwisifo sikashukela, kubalulekile ukufaka ama-beet kwimenyu ngokuqapha ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu le-sucrose kuyo. Ngemuva kwakho konke, imbangela eyinhloko yesifo sabantu abathembela i-insulin amaphesenti aphezulu kashukela wegazi. Ukuze ugweme imiphumela emibi yama-beet emzimbeni, imifino kumele ilungiselelwe kahle futhi idliwe ngenani elilinganiselwe.
Kungenzeka yini ukuthi udle imifino ngaphandle kwemikhawulo?
Ama-Nutritionists kanye nama-endocrinologists ancoma ukuthi abanesifo sikashukela basebenzise izindlela ezifanele lapho besebenzisa ama-beet. Ukuze kungabikho sizathu sokungadideki, kuvunyelwe ukudla imifino, ukunamathela ezinkambisweni ezinconyiwe, ungakhohlwa ukuthi inkomba ye-glycemic yemifino yezimpande ebilisiwe iphakeme kakhulu kunokuluhlaza.
Ngosuku, umuntu onesifo sikashukela uvunyelwe ukudla:
akukho ngaphezu kwe-100 g yamabheki abilisiwe ahlanganiswa neminye imifino,
kufika ku-150 g yemifino eluhlaza,
ungaphuzi ngaphezu kwama-200 g wejusi we-beetroot omusha.
Ijusi leBeetroot, elicwengelwe kusuka kumifino entsha, linomphumela odlubulundayo ezindongeni zesisu, ngakho-ke isilinganiso sansuku zonke kufanele sihlukaniswe izingxenye ezine, okufanele zidakwe phakathi nosuku. Ijusi leBeetroot liba nolaka kancane emahoreni amabili selithathiwe uma ulinika isikhathi sokuma ungalimbozile.
Ukunaka! Njengoba unikezwe umthelela omubi wejusi le-beet kuma-membrane we-mucous, akunconywa ukuphuza isiphuzo esihlanganisiwe kubantu abane-acidity ephezulu yesisu.
Okuzuzisa kakhulu ngempilo yesifo sikashukela kuzoba ukusetshenziswa kwama-beet nezitsha ezivela kuwo ekuseni.
Ukwakheka kwamakhemikhali yemifino
IBeetroot iyisitshalo esinamakhambi esinezithelo zayo ezinombala obomvu noma obomvu, iphunga elimnandi. I-beetroot esetshenzisiwe, njengoba imifino ibizwa nangayo, ngazo zonke izinhlobo zezindlela:
Kubalulekile! Isitshalo sezimpande saziwa kabanzi njengesithako zokupheka zemithi yendabuko. Kusetshenziselwa ukwelapha izifo zegazi, isifo sezinzwa, ama-hemorrhoid, i-tonsillitis, i-laryngitis, izinqubo zokuvuvukala zesikhumba, njll.
Imifino entsha iqukethe:
ama-saccharides ahlinzeka ngomzimba ngezinto zokwakha,
ama-macro- kanye nama-microelements amelwe yi-iodine, i-iron, i-potassium, i-zinc, i-calcium, i-magnesium,
yinkimbinkimbi yamavithamini aqukethe i-B-chungechunge, i-ascorbic acid, i-tocopherol, i-retinol ne-nicotinic acid.
Ijusi leBeetroot liqukethe inani eliphakeme lezakhamzimba
Ukwakheka kungahluka kancane kuya ngezinhlobo zezitshalo zezimpande. Kunezinhlobo ezimhlophe, ezimnyama, ezibomvu, ezinoshukela.
Izimbotshana ezintsha zigaywe emgudwini wesisu isikhathi eside kunokubilisiwe. Lokhu kungenxa yenani elikhulu le-fiber kanye ne-fiber yokudla ekwakhiweni kwezitshalo ezintsha zezimpande. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ongavuthiwe unenkomba ephansi ye-glycemic futhi awenyusi i-glycemia emzimbeni ngokushesha okungaka.
Umhluzi wemifino unomphumela we-diuretic, usiza ukuqeda ukukhohlakala. I-Raw beetweed inethonya elizuzayo esimweni samangqamuzana egazi, isekela ukusebenza kwe-hepatocytes, imishini yokuqinisa izinso, kanye nesinye.
Izinzuzo zemifino yesifo sikashukela
Embuzweni wokuthi kungenzeka yini ukuthi kudliwe ama-beetes onesifo sikashukela sohlobo 2, i-endocrinologist etholakala emtholampilo othile izosiza. Imvamisa impendulo iyakhanya, kepha ngesimo sokuthi akukho ukuhlukunyezwa.
I-beetroot ebilisiwe iyakwazi ukugcina ukwakheka kwayo okunothile nezakhiwo, kepha inkomba yayo ye-glycemic iba phezulu kunaleyo eluhlaza, ngakho-ke umkhiqizo kufanele ufakwe kwimenyu ngayinye ngamanani akhawulelwe. IBeetroot iyakwazi:
vimbela ukuthuthukiswa kwe-atherosclerosis,
lungisa imetabolism ye-lipid,
yehlisa isisindo somzimba esingajwayelekile,
Thuthukisa isimo seengqondo, sithuthukise isimo, sinikeze amandla,
gcina ukusebenza kohlelo lwezinzwa ngenxa yokuba khona kwe-folic acid ekwakhiweni.
Kubalulekile! Ijusi yemifino ilungele i-anemia. Izakhi zalo ezisebenzayo zivusa ukwakheka kwe-hemoglobin namaseli abomvu egazi.
Ungayisebenzisa kanjani isifo sikashukela namanye ama-pathologies
Kwabanesifo sikashukela, kunemithetho ethile evumela ukuthi udle imifino enesifo sikashukela sohlobo lokuqala nolwesibili:
Ungadli ngaphezu kwama-50 g wama-beetle aluhlaza, u-120 g we-abilisiwe noma ingilazi yejusi le-beet ngosuku.
Gada ushukela wegazi futhi ubheke inani le-XE lapho ubala umthamo we-insulin.
Faka imifino emisha yezithelo ekudleni ihlanganiswe nabanye "abamele imibhede".
Imifino ebilisiwe ivunyelwe ukudliwa ngaphandle kokuhlanganiswa neminye imikhiqizo.
Isifo sikashukela sidla i-beetroot ekuseni.
Akunconyelwe ukuthosa imifino ngososo, imayonnaise, ibhotela. Ungasebenzisa ukhilimu omuncu wokuqukethwe okunamafutha amancane.
IBeetroot puree - inketho yokusebenzisa umkhiqizo okwazi ukufeza umzimba womuntu ogulayo futhi onempilo ngamavithamini namaminerali
Ama-Nutritionists ancoma ushintsho oluncane ekuphekeni okuphezulu kwezitsha ezisebenzisa ama-beet, ukuze abe wusizo futhi aphephe kubantu abagulayo. Isibonelo, ohlelweni lokwenza i-vinaigrette, ngaphandle kokusetshenziswa kwamazambane. Kusetshenziswa isiluleko esifanayo ekuphekeni i-borsch. Ngaphezu kwamazambane, udinga ukususa inyama (okungenani ukhethe izinhlobo ezinobunono kakhulu).
Ukuhambisana nezincomo kuzosiza ukugcina izinga le-glycemia esijwayelekile futhi lisuse konke ukungabaza ngokuthi kungenzeka yini ukuthi kudliwe ama-beets anesifo sikashukela.
Ilayisi lohlobo 2 sikashukela
I-Beetroot yohlobo 2 lwesifo sikashukela izosiza ukubhekana ne-pathologies efanayo. Isibonelo, ngezifo zesibindi, ukuqina komzimba. Ngale njongo, sebenzisa i-decoction yemifino. Ukuze uyilungiselele, udinga ukuthatha isivuno esiphakathi nosayizi, uyigeze kahle. Bese uthele amalitha ama-3 amanzi bese ubila ngokushisa okuphansi kuze kusele ilitha elilodwa lamanzi.
Isitshalo esiyimpande sisuswa emanzini, sifakwe i-grated, hhayi i-peeling, sicwiliswe emanzini futhi igcinwe esitofu isikhathi esingaba yingxenye yehora. Ngemuva kokucisha, udinga ukulinda kuze kube yilapho umkhiqizo upholisa kancane, uthathe ingilazi futhi uwuphuze. Isisindo esisele kufanele silandelwe. Phuza i-decoction ka-100 ml njalo emahoreni ama-3-4.
Isifo Sikashukela Esikhulu Kakhulu
Ngesifo sikashukela, kuvunyelwe ukudla ama-beet kanye nama-karoti ngendlela yesaladi yokulwa nesisindo somzimba we-pathological. Faka isitsha esinjalo ngamafutha omnqumo noma wefilakisi. Ukusetshenziswa kwansuku zonke akuvunyelwe. Isaladi kufanele lifakwe ekudleni kabili ngesonto njengokudla ukudla okusheshayo. Uma isiguli sikhononda ngokuqunjelwa, isidlo kufanele sidliwe isidlo sakusihlwa, ngoba siba buthaka kancane.
Kubalulekile! Ukuhlukumeza ulethisi akunconywa, ngoba umphumela ungaba ukuthuthuka kokugcwala.
I-beet ebomvu yesifo sikashukela sohlobo 2: ukwakheka kwamakhemikhali, izinkomba zokusetshenziswa
Ngaphandle komlando ocebile walesi sitshalo sezimpande, kanye nezinzuzo zako, lo muthi awukhuthaziwe ukuthi usetshenziswe ekudleni kwezingane ezincane nabantu abane-allergies. Futhi ukunambitheka kwayo okumnandi kususa ukungabaza ngokusetshenziswa kwalo mkhiqizo ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela.
Ama-beet anezinhlobonhlobo nezinhlobonhlobo. Zonke zihluka ngokunambitheka, izinhlobo, osayizi nobukhulu besitshalo sezimpande. Ama-Beets anezithunzi ezinjalo:
Isifo sikashukela Beetroot
Ngenxa yenani elikhulayo le-fiber, le imifino isiza ukukhipha ubuthi, ubuthi, kanye nezindunduma ezisezibilinini.
Ngaphezu kwefayibha, ibhungro ngalinye liqukethe izinto ezilandelayo:
Amavithamini: E, PP, A
Izinto zokulandela: i-magnesium, i-calcium, i-iodine, i-zinc nezinye
Ngenxa yokuqoqeka okuphezulu kwezinto eziwusizo, imifino inemiphumela elandelayo:
Ukusetshenziswa kwama-beet for sikashukela
Ngaphezu kwalokho, le mifino ihlanze kahle hhayi kuphela amathumbu, kodwa negazi, futhi iphakamisa nezinga le-hemoglobin.
Iningi labantu abanesifo sikashukela besaba ukusebenzisa lesi sitshalo sezimpande. Ngemuva kwakho konke, kukholelwa ukuthi okuqukethwe ushukela kunomthelela ekonakaleni kwenhlala-kahle. Kodwa-ke, ungayeki lokhu imifino ewusizo, ngoba ngokohlu lwemikhiqizo ye-glycemic, isilinganiso se-beet sinama-64. Le nkomba ingaphakathi kwe "yellow zone". Ngakho-ke, kungenzeka ukusebenzisa ama-beet ane-Type 2 sikashukela, kodwa hhayi nsuku zonke
Isibonelo, uma wethula le imifino izikhathi ezingama-1-2 ngesonto ekudleni kwakho, khona-ke ngeke uthole ukulimala, kunalokho, ungaqinisa isimo somzimba ojwayelekile futhi uqinise ukungazeleleki
Ama-beet abomvu abilisiwe, aluhlaza, ujusi we-beetroot noshukela wegazi ophakeme: izinzuzo nokulimaza
Ama-beets abomvu angenye ethandwa kakhulu phakathi kwezinye izinhlobo zawo. Ukusetshenziswa kwama-beets kusiza ezimweni ezilandelayo:
Kuqinisa amasosha omzimba nezakhiwo zomzimba zokuzivikela
Isusa ubuthi kanye nobuthi
Ihlanza igazi namathumbu
Inemiphumela yokuguquguqula nokuqina.
Inomphumela onenzuzo ekusebenzeni kwenhliziyo nohlelo lwenhliziyo
Isusa izinsimbi ezisindayo emzimbeni
Isiza ukuqeda imikhiqizo yokubola
Kuthuthukisa ukusebenza kwesibindi
Kushukumisa ukwakheka kwegazi
Isiza ukugaya amaprotheni
Ilawula umzimba wamafutha omzimba
Ivimbela ukufakwa kwe-cholesterol
Njengoba inkomba ye-glycemic yale imifino imaphakathi, ochwepheshe batusa ukusebenzisa isitshalo sezimpande emthanjeni onamandla:
I-140 g ngemuva kokwelashwa okushisa
250 ml wejusi entsha
70 g eluhlaza
Ijusi leBeetroot kufanele lidakwe emahoreni ama-2 ngemuva kokukhishwa kwalo. Abondli futhi batusa ukuhlukanisa ama-250 ml ezingxenyeni ezi-4 ukuze kuncishiswe umphumela we-mucosa wesibeletho.
Ishukela sikashukela Beetroot
Izici ezingezinhle zalesi sitshalo sezimpande zifaka:
Ukwanda ushukela wegazi ngenani elikhulu lokusetshenziswa komkhiqizo
Izinkinga zenqubo yokufaka i-calcium ngumzimba
Ukusebenza ngokweqile kwamathumbu, okungaba yingozi kulabo abahlushwa izifo ezingapheli kanye nezifo zesisu
I-Oxalic acid ekwakhiweni iyazithinta kabi izitho zohlelo lwezitho zofuzo, ngakho-ke esimweni sokuba khona kwamatshe emzimbeni, kufanelekile ukukhipha ama-beet ekudleni kwakho
Inani elikhulu le-pectin lihlanganisa ukuhamba kwamathumbu futhi licashele ukuvutshelwa
Ngokubonakaliswa kokugula kohlelo lwe-endocrine kanye ne-thyroid gland, iodine ekwakhiweni ingaba nomthelela ongemuhle empilweni yabantu
I-beet ebomvu yesifo sikashukela sohlobo 2: contraindication
Abantu abaningi abanenkinga yesifo sikashukela bayasaba ukudla izimbotshana. Uma wethula le mifino ekudleni kwakho ngokuya ngomthamo onconyiwe, khona-ke ngeke kube khona ukulimala empilweni. Ngokuphambene nalokho, ungayithuthukisa kakhulu impilo yakho, kanye nokunciphisa umzimba. Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi udle ama-beets nsuku zonke, udinga ukubonana nodokotela.
Kodwa-ke, lezo ziguli ezinokuxilongwa okulandelayo kufanele zenqabe ngokuphelele ukusebenzisa lesi sitshalo sempande:
Ukwanda kwe-acidity yesisu
Noma yikuphi ukuphazamiseka kwendlela yokugaya ukudla
Kukhuphuka ukuqina kwegazi
Ukuba khona kwamatshe esikhunjeni
Ukungasebenzi kahle kwe-genitourinary
Ukuvinjwa kokusetshenziswa kwama-beet kulezi zifo kungenxa yezici eziningana:
Ukuhluka kulo mkhiqizo kungenxa yokwakheka kwamakhemikhali yemifino. Njengoba ama-beetle enesibalo esikhulu se-ascorbic acid, kanye nama-organic acid, kukhuthaza ukucashunwa okukhulayo kwejusi yesisu. Ngakho-ke, kwenqatshelwe ukusebenzisa ama-beet nganoma iyiphi indlela.
Kuhle ukukhumbula ukuthi isivuno sezimpande siyaphazamisa ukumuncwa kwe-calcium. Ngakho-ke, akululeki kubantu abane-osteochondrosis, i-osteoporosis nezinye izinkinga ngamajoyina namathambo ukudla imifino. Kunoma ikuphi, ngaphambi kokufaka le imifino ekudleni kwakho, kufanele ubonane nodokotela noma uthinte udokotela wezokwelapha osezingeni eliphezulu ukuthola ukudla okuhlukahlukene nenani elikhulu lemikhiqizo.
Njengoba ama-beetle ecebile nge-iodine, kuyadingeka ukuthi ngaphandle kwalemifino kulezo ziguli ezinezifo ze-thyroid.
Lesi sitshalo sezimpande siqukethe ama-micronutrients amaningi we-pigment, ngakho-ke kufanele kudliwe ngokuqapha kulabo abanemiphumela engemihle yokudla.
Inani elikhulu le-pectin libangela ukugcwala, futhi liphinde linciphise namandla omzimba wokuthola amafutha namaprotheni, athinta kabi umsebenzi wendlela yokugaya ukudla.
Kungenzeka noma ungadli ukudla okubomvu kweshukela?
Ngesifo sikashukela, ungadla imifino, kepha ngokuhambisana nomthamo oqinile wesilinganiso sawo. Ochwepheshe batusa ukusebenzisa izitshalo zezimpande njalo ngesilinganiso sezikhathi ezingama-1-2 ngesonto. Ngemuva kwakho konke, ngaphandle kwenkomba yayo ye-glycemic, ineqhaza ku:
Isusa ubuthi, ama-slags nezinsimbi ezisindayo
Kuthuthukisa inqubo yokuvuselelwa kwesikhumba nezicubu
Ivumela ukuthuthukisa umsebenzi wenhliziyo nemithambo yegazi
Inciphisa ama-Cholesterol Plaques
Kwandisa ubuningi bamathumbu
Ijwayelekile ukukhiqizwa kwegazi emzimbeni
Kungenzeka ukuthi i-beetroot kushukela?
Konke lokhu kubaluleke kakhulu kwisifo sikashukela sohlobo 2. Ungadli ama-beet ezigulini ezinesifo sikashukela lapho kukhona noma yiziphi izifo ezikhona:
Ukuphazamiseka kwe-calcium calcium
Ngaphambi kokuthi uqale ukusebenzisa ama-beet, kuzomele uzihlomise ngezeluleko ezilandelayo:
Ukukhetha okuhle kwabanesifo sikashukela ukusebenzisa ama-beet ngendlela ebilisiwe, ebhakwe kanye ne-stewed. I-Steam nayo iyanconywa. Ngempela, ngesikhathi sokwelashwa okushisa, isitshalo sezimpande sigcina izakhiwo nezimpawu zazo, ngakho-ke, kuzoletha inzuzo ephezulu emzimbeni
Udinga futhi ukukhumbula ukuthi kufanele unikeze izithasiselo amabheji ansundu noma abomvu. Ngemuva kwakho konke, izinga eliphakeme lokugcotshwa kwemifino, kukhulu ukugcotshwa kwama-amino acid alusizo kuyo
Nayi enye ithiphu: kubantu abanezinkinga ngamazinga kashukela wegazi labo, kungcono ukukhipha amasaladi nezinye izitsha ngamafutha omnqumo. Ikhuthaza ukumuncwa kwazo zonke izakhi zokulandela umkhondo ngaphandle kokukhulisa amazinga kashukela egazini.
Ukudla ama-beets lapho kungekho khona ama-contraindication kubalulekile njalo. Ungafaka imifino yezimpande ekudleni njenge-dessert kabili ngesonto ukuze uthuthukise inhlala-kahle, futhi uthole namahomoni enjabul
Faka nama-beet ekudleni kwabantu abanesifo sikashukela kuyadingeka. Kodwa-ke, ngaphambi kokuyisebenzisa ngamanani amakhulu, kubalulekile ukubonana nodokotela, futhi ubheke ngokucophelela izinga leshukela egazini, ukuvimbela ukukhula kwalo ngokweqile.
Inkomba ye-Glycemic nokwakheka kwayo
IBeetroot isitshalo esiyimpande esiyingqayizivele ngokwakhiwa. Akunakwenzeka ukuthi abantu abanesifo sikashukela bangene neminye imifino. Ukuqanjwa kwalo kuchazwe ngemininingwane ethebuleni:
Isitshalo esiyimpande ebomvu sinempilo kakhulu futhi sinothile ngezakhi zomzimba.
Yini ama-beet ewusizo koshukela?
Inani elikhulu le-fiber lehlisa izinga lokufakwa kwe-carbohydrate, futhi lokhu kukhuphula kancane ushukela wegazi, okuyinto efanelekile kwabanesifo sikashukela. Ama-beet anconyelwa abanesifo sikashukela ukuze:
ukunciphisa isisindo somzimba
ukuhlanza imithambo yegazi yama-cholesterol plaque kanye nokwenza ngcono ukuhamba kwegazi,
ukujwayezwa kwamathumbu nokuqeda ukuqunjelwa,
ukuhlanza umzimba wezinhlungu nobuthi,
ukuthuthukiswa kokugeleza kwe-lymph
Ngenxa yezakhi zalo, ama-beet:
kwenyusa izinga lemizimba ebomvu (hemoglobin) kanye nokwakheka kwegazi okwenziwe,
isiza ngomfutho wegazi ophakeme
wenza umsebenzi we-hepatoprotective,
kubuyisela umzimba obuthakathaka, kuqinise ukungatheleleki,
inomphumela wokugaya futhi inciphise ukuvuvukala,
Ivikela izinto ezingasebenzisi irediyo nezinsimbi ezinzima,
igcwala umzimba nge-folic acid ne-iodine.
Uma i-bronchitis ibambezelekile, kubalulekile ukuphuza ujusi we-beetroot.
Ijusi leBeetroot likashukela liyasetshenziswa ezimeni ezinjalo:
nomfutho wegazi ophakeme
i-bronchitis evamile kanye ne-tracheitis,
Ungayipheka kanjani futhi udle izimbali ezinoshukela?
Beet kuphela ebomvu ne-maroon eyethulwa ekudleni kwabashukela. Isifo sikashukela mellitus sikhawulela ukuthathwa kwalo mkhiqizo. Ngesifo sikashukela, kuvunyelwe ukudla amagremu angama-50-70 womkhiqizo ongahluziwe ngosuku; okubilisiwe noma okubhakiwe kuvunyelwe kusuka kumagremu ayi-100 kuye kwangama-140. Ijusi leBeetroot lingaba ngamagremu angama-200 ngosuku, lihlukaniswe ngemithamo emi-4 yama-50 amagremu, bese ujusi usetshenziswa kuphela lapho kuphekwe ekhaya.
Ama-beet, amasha futhi aluhlaza, awalimazi kwabanesifo sikashukela, uma ungadli ngaphezu kwezindlela eziphakanyisiwe.
Ukuze uzuze i-beet, kuyanconywa:
sebenzisa okuluhlaza kuhlanganiswe neminye imifino, uwoyela omncane wamafutha omnqumo noma isipuni sikalamula kalamula,
yidla okubilisiwe noma okubhakiwe, njengesitsha esizimele,
kungcono ukuyidla ekuseni.
Ukulungela kwemifino kufanele kuhlolwe ngommese.
Ama-beet abilisiwe ama-diabetics ayazuzisa ukwedlula ama-beets aluhlaza, ngoba lapho epheka, inani le-sucrose lehla cishe izikhathi ezi-2 bese i-purine ilahlekile - into enomthelela ekubekweni usawoti. Ukupheka kulula kakhulu, i-oda yileli:
Thatha imifino enezimpande bese uyigeza ngamanzi.
Faka epanini lokuthamba (hhayi ikhasi).
Thela amanzi ukumboza ngokuphelele bese uletha kumathumba ngaphezulu kokushisa okukhulu.
Yehlisa ukushisa bese upheka emlilweni ophansi kuze kuphekwe (hlola ngommese).
I-Beets yimifino ethandwa kakhulu. Kunezizathu eziningana zalokhu. Okokuqala, kungumkhiqizo oshibhile kakhulu ongathengwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, futhi uzohlala unezimfanelo ezinhle kakhulu zabathengi. Okwesibili, kusuka kulo ungapheka izitsha eziningi ezidumile nezinempilo - i-vinaigrette, i-borsch. Futhi isidlo esithandwa kakhulu lapho kusetshenziswa khona ama-beet isaladi enama-prunes.
Yini ukusetshenziswa komkhiqizo? Kunezinto eziningi zokulandela umkhondo. IBeetroot nayo iqukethe i-Vitamin C nezinto ze-group B. Ngenxa yokuba khona kwe-bioflavonoids ne-rutin, izindonga zemithambo yegazi ziyaqina.
Kepha kulabo abahlushwa yisifo sikashukela, hhayi nje kuphela izindawo ezinzuzisayo zemifino kanye noshukela okukuzo ezibalulekile, kodwa futhi nezinye izinkomba njengokuqukethwe kwekhalori, amayunithi wesinkwa. Kubaluleke kakhulu ukwazi inkomba ye-glycemic yemifino.
Le mifino inokuqukethwe kwekhalori okuncane kakhulu, okuncane kakhulu esigabeni sayo.Amanani ayo angama-kcal angama-42 kuwo wonke ama-g ayi-100. Ngaphezu kwalokho, kukhona ifayibha eningi, ikakhulukazi, yohlobo oluncibilikayo emanzini. Futhi lokhu kusho ukuthi ngenxa yokusebenzisa ama-beet, ungahlanza amathumbu, ulethe umsebenzi wawo ngokujwayelekile, ubuyisele ukuhleleka ku-microflora yemvelo, uvuse ukubonakala kwamagciwane azuzayo.
Futhi uma kukhona imali enobuthi ngaphakathi eyingozi, imifino iyasiza ukuyiqeda, ilwa ne-cholesterol eyeqile nama-deposits angamafutha. Yilokhu kanye okudingeka ukunakekelwa kwesifo sikashukela. Akunandaba ukuthi luhlobo luni.
Inkomba Yomkhiqizo ye-Glycemic
Kuyaziwa ukuthi kunoshukela omningi kumabhetshu kashukela, ngoba ushukela empeleni wenziwe kuwo. Kuthiwani nge-beetroot? Lesi sithombe singcono, kepha nokho asimnandi kakhulu kwabanesifo sikashukela. Noma iyiphi i-beet inenkomba ye-glycemic ephezulu kakhulu, ikakhulukazi, lokhu kusebenza kuma-beet abilisiwe. Ngakho-ke, iresiphi yamabhele ngama-apula, amantongomane, ama-prunes (uma ebilisiwe) kungcono ukukhohlwa, ngoba kule fomu ingozi izoba ngaphezulu kokuhle. Esikhundleni salokho, ama-beet angaphekiwe nogalikhi angasetshenziswa ukwenza isaladi elihle.
Kudingeka kakhulu ukuhlobana nokudla kwabantu abanezinhlobo ezinesifo sikashukela. Lokhu kusho ukuthi kufanele bawaqede ngokuphelele ama-beet abilisiwe ekudleni kwabo, futhi kuyaqabukela kakhulu ukudla ama-beets aluhlaza, njengoba kunconywa ngudokotela nangokuqapha. Uma ufuna ukusebenzisa le mifino ngendlela ebilisiwe, udinga ukutadisha izindlela zokupheka, ukuthi ungapheka kanjani ngendlela efanele ukuze unciphise inkomba yesitsha se-glycemic.
Ngokuqondene nesifo sikashukela sohlobo lwesibili, lapha imithetho yokubusa ayisiqine kangako, futhi kukhona ukuvumelana okuthile ongakwenza ngaphandle kokulimaza impilo yakho. Ngakho-ke, uma ungadli ama-beet angama-120 abilisiwe nsuku zonke, ngenkathi ulandela izincomo zokulungiselela kwayo, ushukela akunakwenzeka ukuthi ukhuphuke kakhulu. Uma ufuna ukwenza i-vinaigrette, kuyiqiniso uma ushintsha iresiphi futhi wenze konke ngaphandle kwamazambane, inani lomsoco lincane, futhi inkomba ye-glycemic iphezulu kakhulu.
Kwi-borscht, ungasusa nengxenye yamazambane ukufaka ama-beet. Nxephezela ukungabikho kwayo ngengxenye enkulu yenyama ebusayo. Kunconywa futhi ukwenza lesi sidlo sibe phansi ngangokunokwenzeka.
Uma uthanda isaladi ye-beetroot ngama-prunes, ungayipheka, kepha ungafaki izithelo ezomile kuyo. Uma kukhona isaladi enama-granular cottage shizi neminye imithombo yamaprotheni anamafutha aphansi, ngeke kube khona ukulimala.
Ngenxa yale mithetho elula, ungaguqula isisindo sakho, usinciphise kancane, futhi uhlaziye noshukela egazini. Kancane kancane, lokhu kuzokwenza ukuthi isifo sikashukela sohlobo 2 sinciphise. Vele, umphumela wesikhathi eside uxhomeke esigulini uqobo. Njengoba usuthole ukululama okwesikhashana, kudingeka ulondoloze umzimba wakho usesimweni esijwayelekile futhi ungavumeli izimo lapho izinqubo eziphambili ze-metabolic zizoba futhi ze-pathological. Indlela ebalulekile yokwelapha isifo sikashukela sohlobo 2 ngokusebenzisa izinguquko zokuphila kanye nemihlahlandlela yokudla eqinile. Uma wenza lokhu, ungathola umphumela obulindelekile.
Esikhathini sikashukela i-mellitus, ukunamathela ngokuqinile ekudleni kudlala indima ebalulekile. Ukusetshenziswa kwama-beets kuleli cala kungadlala indima efanele futhi engalungile.
IBeetroot iyimifino yemvelo eyingqayizivele. Ukudla ama-beets kukhuthaza ukususwa kukasawoti osindayo osindayo emzimbeni, kwehlise umfutho wegazi, ukuthuthukisa ukusebenza kwesibindi, ukuqinisa ama-capillaries, ukwenza ngcono ukusebenza kwenhliziyo, kanye nokunciphisa i-cholesterol yegazi.
Kanye nalokhu, ama-beet aqukethe i-sucrose eningi (yama-beets ebilisiwe GI = 64). Kuphela kungenxa yalokhu, abanesifo sikashukela kudingeka basisebenzise ngokucophelela.
Ukusekela umzimba weziguli ezithembela i-insulin, okunengqondo, ukondliwa okufanele kubaluleke kakhulu. Ukubalwa kokudla komsoco kwenzelwa umjovo owodwa we-insulin ngudokotela oya kuye. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa ama-beets nganoma yiluphi uhlobo, kubalulekile ukubonisana nodokotela wakho mayelana nokulungisa umthamo we-insulin.
Ngesifo sikashukela, kunezici eziningi ezingezinhle, ezingezinhle. Abantu abanesifo sikashukela bavame ukuba nezinkinga ngesisu kanye ne-duodenum, ukusebenza okujwayelekile kwezinso kanye nesinye. Abantu abanjalo abanesifo sikashukela bahlukaniswe ngokwezigaba ukuze basebenzise ama-beet, okuluhlaza nokubilisiwe.
IBeetroot ngohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela
Emithini yesintu, kukholelwa ukuthi ukudla ama-beets aluhlaza kuthuthukisa impilo yawo wonke umuntu. Akukho okuhlukile futhi iziguli ezinesifo sikashukela.
Thayipha 1 abanesifo sikashukela kufanele banamathele ngokuqinile ekudleni okukhethekile kwesifo sikashukela. I-raw beetle ngezikhathi ezithile lingadliwa ngamanani angeqi ku-50-100 g ngesikhathi, futhi kuyaqabukela kakhulu ukusebenzisa ama-beet abilisiwe.
Ngaphambi kokusebenzisa ama-beets nganoma yiluphi uhlobo, iziguli ezincike ku-insulin (uhlobo 1 sikashukela) kufanele zibonane nodokotela wazo ukubala kahle inani le-insulin elungiselelwe.
Isimo esihlukile ngesifo sikashukela sohlobo 2. Iziguli ziyelulekwa ukuthi zisebenzise isivuno sezimpande ngendlela yaso eluhlaza. Kulokhu, ama-beet aqukethe ushukela omncane kakhulu. I-beetroot ebilisiwe ithuthukisa ukugaya, kepha ngasikhathi sinye inkomba ye-glycemic ekhulayo.
Uhlobo lwesibili lwesifo sikashukela, ngenkathi lunganciki i-insulin, kufanele lunamathele ezilawuleni zokudla okunempilo. Ama-beet aqukethe ama-sucrose amaningi, ayingozi kuma-diabetes. Ukuze ungabangeli izinkinga phakathi nalesi sifo, musa ukweqa ukubethelwa nsuku zonke kwamabhetshu avunyelwe udokotela. Ngokuvamile kunconywa ukusebenzisa ama-beet angaphekiwe futhi abilisiwe ngezikhathi ezithile kuphela (kungabi ngaphezu kwe-100 g yama-beet abilisiwe ngosuku futhi kungabi ngaphezu kwezi-2 ngeviki).
Izici inkambo yalesi sifo ku diabetes ngamunye ngamunye. Ngaphambi kokusebenzisa ama-beets, kufanele uthole izeluleko zikadokotela.
Uhlobo lwesifo sikashukela esihamba kancane kancane luvame ukutholakala kubantu asebekhulile, ngemuva kweminyaka engama-40. Kubonakala ngokuntuleka kwe-insulin noma ukungasebenzi komzimba esenzweni sawo. Ukuvela kwayo kuhlotshaniswa nokukhuluphala ngokweqile, kepha amafa kanye nezakhi zofuzo kuyasheshisa ukukhula kwawo. Ngakho-ke, ukwelashwa kwesifo sikashukela ngenxa yokukhuluphala kuqala ngokudla okunciphisa isimo esivamile futhi kuvumele nezinqubo ze-metabolic emzimbeni.
Kunezindlela eziningi zokunqoba indlala kuhlobo 2 sikashukela. Lapho kudliwa ngezingxenye ezincane kaningana ngosuku, indlala iyanyamalala, kepha ngasikhathi sinye, amazinga kashukela egazini ajwayelekile. Konke kuzoncika ezimfanelweni zomzimba; kwabanye abantu, ukudla kathathu ngosuku kuzokwanela. Embuzweni wokuthi kungenzeka yini ukuthi kudliwe ama-beet ku-mellitus yesifo sikashukela, impendulo ayifani - kungenzeka.
Kumuntu ogulayo, umzimba awukwazi ukubekezelela nokugcina okuqukethwe kweglucose okudingekayo. Umsebenzi wezidakamizwa nokudla yilokho ngqo okuza kulolu sizo. Ama-pancreas eziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus awasakhiqizi i-insulin eyanele, futhi yilo kuphela into elingacubungula ushukela egazini.
Kunezindlela eziningana zesifo sikashukela: mnene, ulinganisele futhi unzima. Ukwelashwa ngakunye kwabo kunezimpawu zabo, njengoba kwenzeka nangondlela yokudla. Kodwa ngaphambi kokudla ama-beet noma eminye imifino, kufanelekile ukubheka izinga le-carbohydrate metabolism, ukuba khona noma ukungabikho kwezinkinga, isimo esivamile sesiguli. I-fiber, equkethe imifino, i-bran yemvelaphi, ikwazi ukwanelisa umzimba ngokushesha ngisho nangezingxenye ezincane.
Okuqukethwe kwekhalori kwama-beets amasha kuncane - 43 kcal nge-100 g yomkhiqizo. Ngakho-ke, ngisho nabantu abakhuluphele ngokweqile bayanconywa ukuthi bafake le mifino kwimenyu, ikakhulukazi ezigulini ezinesisindo esijwayelekile. Kepha lokhu kusebenza ezinhlotsheni zama-beets etafula elibomvu, ngoba ezinye izinhlobo zingahluka kokuqukethwe kwekhalori nokuqukethwe kwe-carbohydrate. Ngokwezimfanelo zayo nokwakhiwa kwamavithamini, ama-beet asondelene izaqathi. Kuhle kakhulu ukuphuza ujusi we-beet obomvu.
Okuhlukile ukubakhona kwesilonda se-peptic sesisu kanye ne-duodenum. Ngalezi zifo, ujusi we-beet obomvu ungadala ukwanda nokucasuka. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngejusi elisha, elineminyaka eminingi emoyeni ulahlekelwa yizindawo ezinolaka. Ngemuva kwalokhu, ijusi lingadliwa ngaphandle kokwesaba ukuthi lingalimaza. Kepha ngaphambi kokusebenzisa kokuqala, kungcono ukubonana nodokotela uma ngabe kukhona izifo ezingadala ukuthi kube nokuncishaniswa kwama-beet noma izakhi zawo.
Okufanele kube ukusetshenziswa kwengilazi eyodwa yejusi lejusi ngosuku. Inani lemifino emisha lingafinyelela kuma-70 g. Ngokuqondene nomkhiqizo abilisiwe, inani lawo lingakhuphuka ngezikhathi ezingama-2-3, kuye ngezimpawu zomzimba nokuphila kahle konke. Ngemuva kokusebenzisa ama-beet, noma ijusi, umzimba uthola inani elanele lamandla ukuze ulondoloze amandla adingekayo omzimba usuku lonke. Ezinsukwini zakudala, ijusi lisize ngempumelelo iziguli ezine-anemia, hhayi ukubuyisela inani kuphela, kodwa futhi nokujwayeza ngokuphelele zonke izakhiwo zegazi.
Indlela enconywayo yokuphuza ujusi we-beetroot akukhona ukuphuza ingilazi ngokushesha, kodwa ukuyihlukanisa ibe ngama-servings ambalwa. Umthamo omuhle ukuhlukanisa ingilazi ibe izingxenye ezi-4, iphuma amahlandla ama-4 ngosuku, ama-50 ml lilinye. Kuyafaneleka ukuqala ngomthamo omncane, ukubona ukuthi umzimba uzosabela kanjani. 1 tbsp ukwamukelwa ngakunye kuzokwanela, khona-ke umthamo ungandiswa. Ezinsukwini zokuqala ezingama-3, inani eliphelele akufanele libe ngaphezu kwe-100 ml.
Kanye nokwanda kwe-hemoglobin egazini, izingxenye zemvelo zama-beet zithuthukisa isimo sohlelo lonke lwenhliziyo. Lokhu kukhombisa kahle futhi kusizakala ngesitho esibalulekile somuntu - inhliziyo. Ukudla okunempilo ngokufakwa kwama-beet ekudleni kuthuthukisa amandla okuvikela omzimba, kwandise ukungagcineki kwawo futhi kubuyisela ukumelana nezifo. Kubantu abahlushwa ukuqunjelwa, ama-beets azokuba wusizo olukhulu. Enye impahla ebalulekile yikhono lokuhlanza isibindi, linqande imiphumela enobuthi yezinto ezilimazayo.